ကမ္ဘာ Archives - Page3of3- YOYARLAY Digital Media and News
ကမ္ဘာပေါ်က မူးယစ်အစွဲလန်းစေဆုံး အရာ(၅)မျိုး
ဘယ်မူးယစ်ဆေးဝါးက အစွဲလန်းစေတတ်ဆုံးလဲ။ ဒီမေးခွန်းလေးက ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဖြေက အမေးခံရတဲ့သူအပေါ်မှာပဲ မူတည်နေပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသော သုတေသနပညာရှင်များကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှုကြောင့် ဖြစ်စေတဲ့ အန္တရာယ်တွေ၊ ဦးနှောက်ရဲ့ ဒိုပါမိန်းစနစ်ကို တက်ကြွစေတဲ့ အတိုင်းအတာ၊ လူတွေဟာ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးအပေါ်မှာ…
Published: April 6, 20186:43 am
Milky way Galaxy ရဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပုံစံကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ခွင့်ရမှာလား
ကျွန်တော်တိုရဲ့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကြီးတည်ရှိနေတဲ့ Milky way နဂါးငွေ့တန်းဆိုတာကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှာကြည့်ဖူးကြလား? တကယ်လို့ ရှာခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင် Milky way လို့နာမည်တပ်ထားတဲ့ ပုံတွေအများကြီးပေါ်လာတာကို တွေ့မှာ သေချာပါတယ်။ နေပါဦးဗျ… ဒါနဲ့… ကျွန်တော်တို့က Milky way ထဲမှာ…
Published: February 28, 20187:47 am
နေမင်းက ဘာကြောင့်အဝါရောင်ဖြစ်နေတာလဲ နေမင်းက ဘာကြောင့် အဝါရောင်ဖြစ်နေတာလဲ…နေရဲ့အရောင်က ဘာလဲ? မဟုတ်ပါဘူး.. တကယ်တော့ အဝါရောင်မဟုတ်ပါဘူး။ လမ်းမှာ တွေ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကို နေကဘာအရောင်လဲလို့ မေးကြည့်လိုက်ပါ။ အမေးခံရတဲ့သူက သင့်ကို ငကြောင်လို့ ထင်ပြီးကြည့်မှာ သေချာပါတယ်။ ပြီးရင် နေကအဝါရောင်လို့…
Published: February 1, 20187:17 am
အင်စတာဂရမ်ကနေကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံအများဆုံးအရိုက်ခံရတဲ့ မြို့တွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
Published: December 16, 20173:12 am
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူမျိုးအသီးသီးတို့ အသုံးပြုနေကြတဲ့စောင်းများမှာ လေးကိုင်းပုံသဏ္ဌာန်စောင်းနဲ့ တြိဂံပုံသဏ္ဌာန်စောင်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ လေးကိုင်းပုံသဏ္ဌာန်စောင်းဟာ တြိဂံပုံသဏ္ဌာန်စောင်းထက် ပိုမိုရှေးကျကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။
Published: September 19, 20171:44 am
ပြောမယုံကြုံဖူးမှသိ ဆိုသလိုပဲ တစ်ခါတစ်လေ ကမ္ဘာကြီးမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းကိစ္စ အမြောက်အမြားရှိနေပါတယ်။ သဘာဝလွန်ရယ်လို့မဟုတ်ပဲ သဘာဝကြီးကိုက ထူးခြားနေတဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့။ ကိုယ်မသိတာနဲ့ မရှိဘူးရယ်လို့ ယူဆမရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သဘာဝထဲကပဲ တိရစ္ဆာန်အချို့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Published: August 24, 20173:25 am
ဒီနေ့ ကျရောက်တဲ့ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ကို ကမ္ဘာ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ (World Environment Day) လို့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂက သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ မြေရေလေ ညစ်ညမ်းမှုတွေ ၊ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုတွေ၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုန်းတီးမှုတွေ၊…
Published: June 5, 20173:09 am
ကမ္ဘာပေါ်က နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကို ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ တခြားနိုင်ငံတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူသွားနိုင်တဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ဩဇာအရှိန်အဝါ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။
Published: May 30, 20174:34 am
ကလေးတွေအတွက် ပိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ကမ္ဘာ ဖန်တီးပေးချင်တဲ့ ဘက်ခမ်း
အင်္ဂလန်အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း David Backham (ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း) ဟာ မိုးခေါင်ရေရှားမှုဒဏ်နဲ့ HIV ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှုန်း မြင့်မားတဲ့ အာဖရိကတိုက်တောင်ပိုင်း ဆွာဇီလန်နိုင်ငံက ရွာတွေကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး ရွာသူ၊ ရွာသားတွေကို ပျော်ရွှင်စရာ ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။
Published: June 9, 20167:11 am